Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb, Kulankii Madaxwayne Qoorqoor iyo Gudiga Caleemosaarka | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb, Kulankii Madaxwayne Qoorqoor iyo Gudiga Caleemosaarka
Mar 25, 2020 - 2 Aragtiyood
Dhuusamareeb ( Kalshaale ) Magaalada Dhuusamareeb waxaa kulan gaar ah ku yeeshay Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor, Madaxwayne ku xigeenka Cali Daahir Ciid iyo Guddiga u xilsaaran munaasabadda lagu caleemo saarayo.
Waxa ay iska xog wareysteen suurtagalnimada munaasabadda Caleemo-saarka, waxyaabaha u hirgelay guddiga, madaxda ay martiqaadeen iyo cabsida la xidhiidha caabuqa Coronavirus oo lagu baaqay in la joojiyo isu imaatinka Bulshada.
Xubnaha guddiga waxa ay wararku sheegayan in ay qorsheeyeen qabsoomidda Munaasabadda Caleemo-saarka, iyaga oo marti qaadaya madax kooban siday sheegeen ilo wareedyo kala duwan.
Guddoomiyaha Guddiga Xafladda Caleemo-saarka Madaxweynaha iyo ku xigeenka Galmudug Yusuuf Garaad Cumar ayaa safar dhulka ah oo uu kaga tagay Dhuusamareeb ku tagay Koofurta Gaalkacyo.
Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor ayaa loo doortay Madaxwaynaha Galmudug 2-dii Febaraayo, waxaana horyaalla wax ka qabashada Caqabadaha kala duwan ee Galmudug horyaalla.
Waa dhaqan aad iyo aad u xun , in la dhigto madax-shub aka ANNA WAA I KAN ! Lacagta iyo waqtiga ku baxaya waa si xun u isticmaal hanti umadeed . Istus-tuskaas ugu horeeya ayaa waxuu cadeynayaa inuusan
mudanahu aheynn = Aamin qawi ah , ee uu yahay tuug soo xirtay MAREEG aka tie !
Al Capone baa yaabay !
Xaqiiq, waa caqli daanyeernimo…
Horta gormuu dhaqankan Shaash-saarku ku soo biiray xil-qabadka Soomaaliya?…